यसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ जाडोमा खुट्टाको | Makalukhabar.com
माघ २८ । जाडो मौसममा हातगोडा फुट्ने, फुस्रोहुने समस्या धेरै देखिन्छ । जाडोको समयमा हामीले अनुहार र हातको सौन्दर्यमा ध्यान दिएपनी खुट्टाको सौन्दर्यमा ध्यान त्यती दिदैँनौ तर यो एकदम गलत हो जसरी हामी अनुहार र हातको सौन्दर्यमा ध्यान दिन्छौँ त्यती नै खुट्टाको सौन्दर्यमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । हाम्रो अनुहार र हात मात्र सुन्दर भएर खुट्टा नराम्रो भएमा हाम्रो साैन्दर्यमा केही न केही कमी भएको देखिन्छ । जाडो मौसममा अनुहार, हातखुट्टाको को छाला फु्ट्ने, फुस्रो हुने र चमक हराउँने हुन्छ । बिशेष खुट्टा फुट्नुको मुख्य कारण भनेको खुट्टामा पसिना उत्पन्न गर्ने ग्रन्थी सक्रिय नहुनु हो । साथै धूलो, माटो र नराम्रो साबुनको प्रयोगले पनि हात र खुट्टाको छालामा असर पर्छ । खुट्टाको देखभाल राम्रो नभए कुर्कुच्चा फुट्ने र दुख्ने हुन्छ । जाडाेमा खुट्टालाइ कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ केही घरेलु टिप्सहरु तल दिईएको छ ।
यसरी निमको तेलको प्रयोग गरी सुन्दर र स्वास्थ्य बन्नुस्
असार ३० । निम एउटा बनस्पति हो । यसको स्वाद अति नै तितो हुन्छ । तर निम स्वास्थ्य र सौन्दर्यको दृष्टिकोणले निकै गुणकारी छ । नीमलाई हामी औषधीको रुपमा प्रयोग गर्नुकाे साथै सौन्दर्यको लागि पनी प्रयोग गर्न सक्छौँ निमको बीउबाट निकालिएको तेल निकै पफाइदाजनक छ यस तेलले स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुवैका लागि प्रयोग... जारी राख्नुहोस...
गर्मीमा नरिवलको पानी पिउँदा स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा चमत्कार
असार २५ । काँचो नरिवल पानी खाने प्रचलन हाम्रो देशमा बिस्तारै बढ्दै गईरहेको छ । नरिबलको पानी नेपालमा फलफूल पसलहरुमा कहि कतै देख्न थालिएको छ । पोषक तत्वले भरिपूर्ण काँचो नरिवलको पानी स्वाद, स्वास्थ र सौन्दर्यको दृष्टिकोणले एकदमै गुणकारी छ । यसलाई छालाको सौन्दर्यका लागि यो निकै उपयोगी मानिन्छ । शरीरमा... जारी राख्नुहोस...
अनुहार सुन्दर बनाउन यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस
असार २४ । मानिसको अनुहार यस्तो चिज हो जसले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ । आफ्नो अनुहार सुन्दर भएर आफू सबैको आकर्षकको पात्र बन्नु पाईयोस भन्ने सबैको ईच्छा हुन्छ । हुन पनी सुन्दर अनुहारले जो कसैको ध्यान खिचिरहेको हुन्छ । सुन्दर अनुहारप्रति जो कोहि पनि लालहित हुन्छन् । सुन्दर अनुहार हुने मानिसले... जारी राख्नुहोस...
असार २१ । पानी मानिसका लागि अत्यावश्यक कुरा हो । हाम्रो शरीरको अधिकांश हिस्सा नै पानीले ओगटेको हुन्छ । चिकित्सक, पोषणविज्ञ मात्र नभएर सौदन्य विज्ञ पनि एक वयस्क मान्छेले स्वस्थ रहनका लागि एक दिनमा ६–७ लिटर शुद्ध पानी पिउनु पर्ने सल्लाह दिन्छन् । चिसो र तातो दुवै प्रकारको पानी पिउने गरिन्छ । तर... जारी राख्नुहोस...
के हाे कस्मेटिक सर्जरी ? र किन गरिन्छ ?
असार १९ । कस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरीकै एउटा विधि हो । कस्मेटिक सर्जरीलाई सुन्दरता निखार्ने प्रक्रियाका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । विशेषगरी अनुहारमा नमिलेको भाग र चाउरी परेको छालालाई तन्काउनेदेखि लिएर सुन्दर अनुहार तथा शरीरका लागि कस्मेटिक सर्जरी गर्न सकिन्छ । शरीरको बाहिरी अंगमा कुनै कमी महसुस... जारी राख्नुहोस...
यी सात बानी आजैबाट त्यागै र स्लिम र स्वास्थ्य बनौँ
असार १८ । आजभोली मोटोपनको समस्याले धेरै व्यक्ति ग्रसित भएका छन् । आफ्नो बढ्दो बजनको कारण धेरै मानिस तनावमा छन् । जो व्यक्ति पनी आफू स्लिम सुन्दर र फिट एण्ड फाइन हुन चाहन्छन् । एउटा स्लिम र सुन्दर शरिरले जो कोहीलाई पनी लोभ्याउँछ तर एउटा मोटो भद्दा शरिरले हाम्रो सौन्दर्यमा त कमी ल्याउँछ नै यसका साथ सा... जारी राख्नुहोस...
अनुहार सुन्दर र चम्किलो बनाउँने केही घरेलु उपाय
असार १५ । सुन्दर र आकर्षित अनुहार होस् भनेर हरेक महिला या पुरूष चाहन्छन् । यही सौन्दर्यको लागि उनीहरुले लाखौँ रुपैँया खर्च गर्न नि तयार हुन्छन् । अनुहार सुन्दर र चम्किलो बनाउने धेरै प्रोडक्टहरुपनि आजभोली बजारमा प्रशस्तै पाईन्छ तर यी प्रोडक्टहरुले धेरैलाई श्रेणिक सौन्दर्य दिलाए पनि पनि यसको साईड ईफे... जारी राख्नुहोस...